သူ့ရဲ့အားအကိုးရဆုံး အရေးပေါ်ဝန်ကြီးဈာပနမှာ ဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင် ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပူတင်(ရုပ်သံ) - Voice Of Burma
သူ့ရဲ့အားအကိုးရဆုံး အရေးပေါ်ဝန်ကြီးဈာပနမှာ ဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင် ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပူတင်(ရုပ်သံ)
သူ႕ရဲ႕အားအကိုးရဆုံး အေရးေပၚဝန္ႀကီးစ်ာပနမွာ ဟန္မေဆာင္နိုင္ေလာက္ေအာင္ ဝမ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပူတင္
ဗီဒီယိုဖိုင် အောက်ဆုံးတွင်ပါသည်။(Zawgyi Font ဖြင့် ဖတ်မရသူများ အောက်တွင် Unicode ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်)
႐ုရွားသမၼတပူတင္ဟာ အဂၤါေန႕က ေသဆုံးသြားခဲ့တဲ့ အေရးေပၚဝန္ႀကီး Yevgeny Zinichev ကို ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစြာနဲ႕ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့တယ္လို႔ ႐ုရွားမီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၅၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ အေရးေပၚဝန္ႀကီးဟာ အာတိတ္ေဒသမွာ ေလ့က်င့္မႈေတြျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ရိုက္ကူးေရးသမားျဖစ္သူကို ကယ္တင္ဖို႔ႀကိဳးစားရာကေန ေသဆုံးခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။…
ပူတင္ရဲ႕ အားကိုးရသူတစ္ဦးလို႔ သိရကာ ႐ုရွားအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြကို ထမ္းေဆာ င္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ပူတင္ဟာ ႐ုရွားနိုင္ငံအလံ ေတာ္လႊမ္းၿခဳံထားတဲ့ အေရးေပၚဝန္ႀကီးရဲ႕ အေခါင္းကို ေခါင္းနဲ႕ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ထိၿပီး ဦးၫႊတ္ခဲ့ကာ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ဇနီးသည္၊ သားျဖစ္သူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။…
သူဟာ အေခါင္းကို ၂ႀကိမ္တိုင္တိုင္ဖြင့္ကာ ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး အေဝးကိုထြက္သြားခဲ့ရာမွာေတာ့ စိတ္ရႈပ္ေထြးေနဟန္ေပါက္ေနတယ္လို႔ Daily Mail က ဆိုပါတယ္။ အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရႈံးမႈတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ပူတင္က ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိရၿပီး ရဲရင့္သန္မာကာ သတၱိနဲ႕ျပည့္ ဝသူတစ္ဦးလို႔ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဆိုပါတယ္။….
ပူတင္ဟာ Zinichev ကို ႐ုရွားနိုင္ငံရဲ႕ အျမင့္ဆုံးဂုဏ္ျပဳဆုျဖစ္တဲ့ ႐ုရွားသူရဲေကာင္းဘြဲ႕ထူးကို ေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ပူတင္ဟာ Zinichev ကို သူ႕ရဲ႕ေနရာဆက္ခံမယ့္သူအျဖစ္ေတာင္မွ ထည့္သြင္းထားတယ္လို႔ တခ်ိဳ႕က ယုံၾကည္ေနၿပိး ကရင္မ္လင္နန္းေတာ္ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွာလည္း ထိပ္တန္းရာထူးကို ေပးအပ္ခဲ့ကာ သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကား ဆက္ဆံေရးက ေတာ္ေတာ္ေလးနက္ရွိုင္းတယ္လို႔လည္း သုံးသပ္ၾကပါတယ္။
ထြက္ေပၚလာခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပုံေတြအရ ပူတင္ဟာ ေတာ္ ေတာ္ေလးဝမ္းနည္းေၾကကြဲေနဟန္ရွိၿပီး စ်ာပနအခမ္း အနားတေလွ်ာက္လုံး စိတ္မသက္မသာျဖစ္ေနတာကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ အေရးေပၚဝန္ႀကီးဟာ ေရထဲျပဳတ္က်ခဲ့တဲ့ ရိုက္ကူးေရးသမားကို ကယ္တင္ဖို႔ ဒိုက္ဗင္ထိုးဆင္းခဲ့ရာကေန ေက်ာက္ေဆာင္နဲ႕ တိုက္မိၿပီးေသဆုံးခဲ့ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႕သယ္ေဆာင္ကာ ေဆး႐ုံပို႔ေဆာင္စဥ္အတြင္းမွသာ ေသဆုံးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ေဖာ္ျပမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
သူ့ရဲ့အားအကိုးရဆုံး အရေးပေါ်ဝန်ကြီးစျာပနမှာ ဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင် ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပူတင်
ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာ အင်္ဂါနေ့က သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အရေးပေါ်ဝန်ကြီး Yevgeny Zinichev ကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာနဲ့ နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ ရုရှားမီဒီယာတွေက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ် အရေးပေါ်ဝန်ကြီးဟာ အာတိတ်ဒေသမှာ လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း ရိုက်ကူးရေးသမားဖြစ်သူကို ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားရာကနေ သေဆုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။…
ပူတင်ရဲ့ အားကိုးရသူတစ်ဦးလို့ သိရကာ ရုရှားအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ အဆင့်မြင့်ရာထူးတွေကို ထမ်းဆော င်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပူတင်ဟာ ရုရှားနိုင်ငံအလံ တော်လွှမ်းခြုံထားတဲ့ အရေးပေါ်ဝန်ကြီးရဲ့ အခေါင်းကို ခေါင်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ထိပြီး ဦးညွှတ်ခဲ့ကာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ဇနီးသည်၊ သားဖြစ်သူတို့ကိုလည်း တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။…
သူဟာ အခေါင်းကို ၂ကြိမ်တိုင်တိုင်ဖွင့်ကာ ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး အဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ရာမှာတော့ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေဟန်ပေါက်နေတယ်လို့ Daily Mail က ဆိုပါတယ်။ အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ပူတင်က ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပြီး ရဲရင့်သန်မာကာ သတ္တိနဲ့ပြည့် ဝသူတစ်ဦးလို့ ချီးကျူးခဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းလည်း ဆိုပါတယ်။….
ပူတင်ဟာ Zinichev ကို ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုဆုဖြစ်တဲ့ ရုရှားသူရဲကောင်းဘွဲ့ထူးကို ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ပူတင်ဟာ Zinichev ကို သူ့ရဲ့နေရာဆက်ခံမယ့်သူအဖြစ်တောင်မှ ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ တချို့က ယုံကြည်နေပြိး ကရင်မ်လင်နန်းတော်ရဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာလည်း ထိပ်တန်းရာထူးကို ပေးအပ်ခဲ့ကာ သူတို့နှစ်ဦးကြား ဆက်ဆံရေးက တော်တော်လေးနက်ရှိုင်းတယ်လို့လည်း သုံးသပ်ကြပါတယ်။
ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအရ ပူတင်ဟာ တော် တော်လေးဝမ်းနည်းကြေကွဲနေဟန်ရှိပြီး စျာပနအခမ်း အနားတလျှောက်လုံး စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေတာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အရေးပေါ်ဝန်ကြီးဟာ ရေထဲပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ ရိုက်ကူးရေးသမားကို ကယ်တင်ဖို့ ဒိုက်ဗင်ထိုးဆင်းခဲ့ရာကနေ ကျောက်ဆောင်နဲ့ တိုက်မိပြီးသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဟတ်ယာဉ်နဲ့သယ်ဆောင်ကာ ဆေးရုံပို့ဆောင်စဉ်အတွင်းမှသာ သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဖော်ပြမှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။